ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သောဗီတာမင်များကားအဘယ်နည်း။ - သင်၏ကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ - Teles Relay
မူလစာမျက်နှာ » သဘာဝကကုစား »ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သောဗီတာမင်များကားအဘယ်နည်း။ - သင်၏ကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ
Tele RELAY တစ်ခု 12 အောက်တိုဘာလ 2019
ဗီတာမင်များသည်ကိုယ်ခန္ဓာ၏ကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်စေရန်လိုအပ်သောအာဟာရများဖြစ်သည်။ အဆီပျော်ဝင်နိုင်သည့်ဗီတာမင်များနှင့်ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သည့်ဗီတာမင်များရှိသည်။ သူတို့၏အမည်ကဖော်ပြသကဲ့သို့ဤဗီတာမင်များအကြားခြားနားချက်သည် ၄ ​​င်းတို့ပျော်ဝင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။
ခန္ဓာကိုယ်ရှိဆဲလ်တိုင်းသည်အမိုင်နိုအက်ဆစ်များ၊ တွင်းထွက်ပစ္စည်းများနှင့်အခြားဒြပ်ပေါင်းများကိုပရိုတိန်း၊ အချို့သောဗီတာမင်များသည်ရရှိလာသောဒြပ်ပေါင်းများ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည် ၎င်းတို့သည်ခန္ဓာကိုယ်၏စနစ်တကျလည်ပတ်မှုကိုသေချာစေရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သိရှိထားသောဗီတာမင် ၁၃ ခုတွင်အုပ်စုနှစ်ခုခွဲခြားနိုင်သည်။
ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သောဗီတာမင်များ ဒီဗီတာမင်တွေဟာရေထဲမှာပျော်ဝင်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကသူတို့ကိုမသိုလှောင်နိုင်ဘူး။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုနေ့စဉ်ဆေးထိုးရန်လိုအပ်သော်လည်းထိန်းချုပ်ထားသောနည်းဖြင့်ပိုလျှံခြင်းကို၎င်းမှတစ်ဆင့်ဖယ်ထုတ်သည် ချွေး နှင့်ဆီး
အဆီပျော်ဝင်နိုင်သောဗီတာမင်များ ဒီဗီတာမင်တွေကအဆီထဲမှာပျော်ဝင်သွားပြီးခန္ဓာကိုယ်ကသူတို့ကို adipose တစ်သျှူးနဲ့အသည်းထဲမှာသိုလှောင်တယ်။ အလွန်အကျွံအလွန်အကျွံသည်ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်အစားအစာဖြည့်စွက်မှုများကိုသတိထားပါ၊ ဆရာ ၀ န်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးပညာရှင်နှင့်အမြဲတမ်းတိုင်ပင်ပါ
အချို့သောဓာတ်သတ္တုများနှင့်မတူဘဲသူတို့သည်အလွန်သေးငယ်သောဆေးများဖြင့်ပြုမူကြသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်၎င်းတို့တစ် ဦး တည်းကိုမထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည် အဲဒါကိုငါတို့အစားအစာထဲမှာထည့်ဖို့လိုတယ်.
ဗီတာမင်တွေရဲ့အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်တွေထဲမှာအစာဓာတ်တိုးခြင်း၏ဓာတ်တိုးခြင်းဖြစ်သည်, ဇီဝဖြစ်စဉ်တုံ့ပြန်မှုများနှင့်အစားအစာမှတဆင့်ထောက်ပံ့စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုနှင့်လွှတ်ပေးရန်။ ဤအရာကိုသိခြင်းသည်ဤအော်ဂဲနစ်အာဟာရဓာတ်များသည်ဆယ်လူလာတက်ကြွခြင်းနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အရေးကြီးပုံကိုနားလည်ရန်လွယ်ကူသည်။ သင်၏အစားအစာများတွင်ဗီတာမင်များကိုအမြဲထည့်သွင်းရန်သတိရပါ။
ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သောဗီတာမင်များထဲမှဗီတာမင် B1 သို့မဟုတ် thiamine
ဗီတာမင် B1 ချို့တဲ့မှုသည်အောက်ပါရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည် -
အသွေးသည်ဂလူးကို့စသို့မဟုတ် hypoglycemia သိသိသာသာကျဆင်းခြင်း
ဤဆောင်းပါးသည်သင်စိတ်ဝင်စားနိုင်: ခြင်ဆေးခွေကဲ့သို့ဗီတာမင် B1 ကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်နည်း
ဗီတာမင် B12 သို့မဟုတ် Riboflavin
ဒီဗီတာမင်အဆီ, ပရိုတိန်းနှင့်များ၏ဓာတ်တိုးဓာတ်ကူပစ္စည်း၏ function ကိုရှိပါတယ် ဘိုဟိုက်ဒရိတ်.
ဗီတာမင် B12 ကြွယ်ဝသောရင်းမြစ်များမှာနို့၊ အသည်း၊ ပဲ၊ ပဲဟင်း၊ ဒိန်ခဲနှင့်သစ်သီးခြောက်များဖြစ်သည်။
ဗီတာမင် B12 ချို့တဲ့ခြင်းသည်အမြင်အာရုံကိုထိခိုက်စေသည် နှင့်ပါးစပ် mucosa နှင့်လည်ချောင်းအတွက်ရောင်ရမ်းခြင်း။
ဗီတာမင် B3 သို့မဟုတ် niacin သို့မဟုတ်နီကိုတင်းအက်ဆစ်
ဒီဗီတာမင်သည်အထူးသဖြင့်ပဲပင်များ၊ သစ်သီးခြောက်များ၊ ကဇေါ်မြှုပ်။ ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်သည် ၎င်းသည်အစားအစာများကိုစွမ်းအင်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပေးသည်.
ဗီတာမင် B3 ချို့တဲ့ခြင်းသည် pellagra ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်အရေပြားပေါ်ရှိအစက်အပြောက်များနှင့်အစာခြေခြင်းနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာအနှောင့်အယှက်များကြောင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုပြသသောရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်သည်။
Vitamin B5 သို့မဟုတ် Panthothenic Acid သည်ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သောဗီတာမင်တစ်ခုဖြစ်သည်
ဒီဗီတာမင်သည်ကိုယ်ခံအားစနစ်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည် ၎င်းသည်ကိုယ်ခန္ဓာကိုရောဂါကူးစက်မှုမှကာကွယ်ရန်ကူညီသည်။ ၎င်းသည်အဆီများ၊ ပရိုတိန်းများနှင့်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်တို့၏ဇီဝြဖစ်မှုတွင်လည်းပါ ၀ င်သည်။
ဗီတာမင် B5 ၏ချို့တဲ့ခြင်းသည်ကိုယ်ခန္ဓာ၏ခုခံကာကွယ်မှုအားနည်းသွားစေပြီးရောဂါကူးစက်မှုကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။
ဗီတာမင် B6 သို့မဟုတ် pyridoxine
ဤဗီတာမင်သည်အမိုင်နိုအက်ဆစ်များ၏ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနှင့်ဟီမိုဂလိုဘင်ပေါင်းစပ်မှုတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ဗီတာမင် B6 ၏ချို့တဲ့မှုသည်အစားအသောက်ပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ငှက်ပျောသီး၊ ထောပတ်သီး၊ အစေ့လုံးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များသည်အများအားဖြင့်ဗီတာမင် B6 ၏အရင်းအမြစ်များဖြစ်သည်။
ဗီတာမင် B8 သို့မဟုတ် biotin သည်ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သောဗီတာမင်တစ်ခုဖြစ်သည်
ဤဗီတာမင်ကိုတိရိစ္ဆာန်နှင့်အပင်မှဖြစ်သောအပင်များစွာတွင်တွေ့ရသည်။ ထို့ကြောင့်ဗီတာမင် B8 ချို့တဲ့သည်။
ဗီတာမင် B9 သို့မဟုတ်ဖောလစ်အက်ဆစ်
ဒီဗီတာမင်သည်ဒီအင်အေကိုပေါင်းစပ်ရန်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည် သန္ဓေသားလောင်း၌ရှိသကဲ့သို့အသစ်သောတစ်ရှူးများ၏ဆဲလ်၌တည်၏။ ၎င်းသည်သွေးနီဥများပေါင်းစပ်ခြင်းတွင်လည်းပါ ၀ င်သည်။
ဗီတာမင် B9 ချို့တဲ့ခြင်းသည်သွေးအားနည်းခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။
ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သောဗီတာမင်များထဲမှဗီတာမင် B12 သို့မဟုတ် cyanocobalamin
အသည်းသည်ဗီတာမင် B12 ၏အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ ဒီပေါင်းစပ်မှုအတွက်ဒီဗီတာမင်သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည် သွေးနီဥများ. ၎င်းတွင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတွင်ကိုဘော့ပါဝင်သောတစ်ခုတည်းသောဗီတာမင်ဖြစ်သောကိုဘော့၊ ၎င်းသည်၎င်း၏အမည်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်မည်သည့်အပင်နှင့်မည်သည့်သတ္တဝါမှမည်သည့်အရာမျှဗီတာမင် B12 ကိုမထုတ်လုပ်နိုင်ပါ။ ဗီတာမင် B12 ချို့တဲ့ခြင်းသည်သွေးအားနည်းရောဂါကိုလည်းဖြစ်စေသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဗီတာမင်စီအကြောင်းသာပြောရမယ်။ ဒီနောက်ဆုံးဗီတာမင်ပရိုတိန်း၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက် အဆိုပါ connective တစ်ရှူးအဆင့်မှာနှင့်၏သစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုး၌တည်၏ အရိုးနု အရိုး။
ဗီတာမင်စီချို့တဲ့ခြင်းသည်ဆက်သွယ်မှုတစ်သျှူးအဖွင့်အပိတ်များ၊ အရေပြားအောက်သွေးများ၊ အမာရွတ်များနှင့်အခြားဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပြstructuralနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ဤဆောင်းပါးသည်သင်စိတ်ဝင်စားနိုင်: ပျော့ရောဂါကူးစက်မှုဆန့်ကျင်6ကသဘာဝပဋိဇီဝဆေး
အတိုချုပ်ပြောရရင်မင်းနားလည်လိမ့်မယ်၊ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ရန်ဗီတာမင်များသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအာဟာရများဖြစ်သည်။ ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သောဗီတာမင်များ၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုသာကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဖော်ပြပါဂုဏ်သတ္တိများ, သူတို့အားအဆီပျော်ဝင်ဗီတာမင်ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။
ဗီတာမင်တွေမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုကျန်းမာသန်စွမ်းစေရန်အတွက်ဗီတာမင်များစွာရှိသည်။ Read more »
သင်၏ဆံပင်ကိုဂရုစိုက်ရန်3ဆေးဝါးဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုများ - သင်၏ကျန်းမာရေးကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ပါ။
1990 မှ 2019 အထိရွှေစီးဖိနပ် - ဗီဒီယို
ယူနိုက်တက်စတိတ်ကိုသိမ်းပိုက်ထားသည့်အအေးပိုင်းက5လူများကိုသတ်ပစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်
Liam Payne ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေမှုအကြောင်းစဉ်းစားပြီးပြီဟုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်